“Mar marsiiyo ma jirto markaan” – Barcelona oo doonaysa in Real Madrid ay marti galiso Final-ka Copa del Rey – Gool FM
“Mar marsiiyo ma jirto markaan” – Barcelona oo doonaysa in Real Madrid ay marti galiso Final-ka Copa del Rey
Liibaan Fantastic February 9, 2018
(Barcelona) 09 Feb 2018 Barcelona ayaa xalay u soo gudubtay kulanka kama danbaysta ee koobka boqorka Spain kadib markii ay 2-0 uga adkaatay Valencia.
Sida sharciga ah, marka la xaqiijiyo labada kooxood ee gaaray final-ka Copa del Rey ayaa la isku raacaa garoonka lagu qaban doono kulanka Final-ka.
Barcelona iyo Sevilla ayaa sanadkaan wada ciyaari doona Final-ka koobka boqorka Spain, Sevilla ayaa soo jeedisay in kulanka lagu ciyaaro garoonkeeda Ramon Sanchez.
Laakiin Barcelona ayaa doonaysa in Real Madrid ay marti galiso Final-ka koobka, maadama garoonkeedu uu leeyahay qaad wayn isla markaana uu yahay mid kamid ah garoomada ugu wanaagsan Spain.
Waxaa jiray warar sheegaya in Final-ka lagu qaban doono garoonka cusub ee Atletico Madrid ee Wanda Metropolitano laakiin maalintaas maalinta ka danbaysa ayeey Atletico ku marti qaadaysaa garoonkeeda Real Betis taas oo meesha ka saaraysa fikirkaas.
Mundo Deportivo iyo wargayska Sport oo labaduba ka soo baxa Catalonia ayaa isku raacay in Real Madrid aysan markaan haysan cudur daar ay ku diidi karto in garoonkeeda lagu marti galiyo Final-ka Copa del Rey.
Haddii lagu guul daraysto in Real ay aqbasho marti galinta Copa del Rey, waxaa suurogal ah in lagu qabto Camp Nou, garoonka Sevilla iyo kan Valencia ee Mestalla Stadium.
Laacibkii Arsenal Francis Coquelin oo Xalay Maaliyada Xoog uga siibay Lionel Messi!!
Muxuu Coutinho ka yiri Goolkiisii ugu horreeyay uu xalay Barcelona u dhaliyay????